चीन डेंगू रैपिड टेस्ट किट कारखाना र आपूर्तिकर्ता | PRISES
डेंगू आईजीजी / आईजीएम रैपिड टेस्ट मानव सीरम वा प्लाज्मामा आईजीजी एन्टी – डेंगू भाइरस र आईजीएम एन्टी-डेंगू भाइरसको एकैसाथ पत्ता लगाउन र भेदभावको लागि पार्श्व प्रवाह इम्यूनोसे हो। यो पेशेवरहरु द्वारा स्क्रीनि as परीक्षणको रूपमा प्रयोग गर्न र डेंगू भाइरसको साथ संक्रमणको निदानमा सहयोगको रूपमा प्रयोग गर्नका लागि हो। डेंगू IgG / IgM रैपिड परीक्षणको साथ कुनै पनि प्रतिक्रियाशील नमूना वैकल्पिक परीक्षण विधि (हरू) को साथ पुष्टि हुनुपर्छ।
सारांश र परीक्षणको विस्तार
डेंगू भाइरस, भाइरसको चार अलग सेरोटाइपहरूको परिवार (डेन १, २,,,)), एकल तनावग्रस्त, ईन्फाल्डेड, सकारात्मक भावनाको आरएनए भाइरस हो। भाइरसहरू दिनको समय काट्ने स्टेजेमिया परिवार, मुख्यत: एडीज एजिप्टी, र एडीज अल्बोपिक्टसको लामखुट्टेद्वारा प्रसारित हुन्छन्।
विचार र सामग्री प्रदान गरियो
१. प्रत्येक किटमा २ test परीक्षण उपकरणहरू हुन्छन्, प्रत्येक भित्र पन्च पाउचमा दुई वटा आइटमहरू सहित बन्द गरिएको हुन्छ:
a एउटा क्यासेट उपकरण।
b एक desiccant।
२ 25 x µ miniL मिनी ड्रॉपर्स।
S. नमूना Diluent (२ बोतल, m mL)
O. एक प्याकेज सम्मिलित गर्नुहोस् (प्रयोगको लागि निर्देशन)।
भण्डारण र शेल्फ-लाइफ
१. २--30० ℃ (-36-8686 एफ) मा छापिएको फोइल पाउचमा प्याक गरिएको टेस्ट उपकरण भण्डार गर्नुहोस्। फ्रिज नगर्नुहोस्।
२. शेल्फ-लाइफ: निर्माण मितिबाट २ months महिना।
उत्पादको नाम: डेंगू igg / igm रैपिड टेस्ट किट
ब्रान्ड नाम: गोल्डन समय
विधि: कोलोइडल सुन
नमूना: सम्पूर्ण रगत / सीरम, वा प्लाज्मा नमूना
प्याकिंग: २ tests परीक्षण / बक्स
पठन समय: २min मिनेट
अघिल्लो: LH Ovulation परीक्षण पट्टी
अर्को: फ्लू एबी रैपिड टेस्ट किट
चरण १: नमूना र परीक्षण कम्पोनेन्टहरू ल्याउनुहोस् यदि कोठाको तापक्रममा फ्रिज गरिएको छ वा स्थिर गरिएको छ। एक पटक पग्लियो परख भन्दा पहिले राम्रो नमूना मिश्रण।
चरण २: जब परीक्षणको लागि तयार हुन्छ, तब पाउच खोल्नुहोस् र उपकरण हटाउनुहोस्। एक सफाई, समतल सतहमा परीक्षण उपकरण राख्नुहोस्।
चरण:: नमूनाको ID नम्बरको साथ उपकरण लेबल गर्न निश्चित गर्नुहोस्।
चरण:: मिनी ड्रॉपर भर्नुहोस् नमूनाको साथ नमूना रेखा पार नगर्नुहोस् जुन निम्न छविमा देखाईएको छ। नमूनाको भोल्युम करीव µµL हो।
नोट: यदि तपाइँ मिनी ड्रॉपरसँग परिचित हुनुहुन्न भने परीक्षणको लागि केहि समय पहिले अभ्यास गर्नुहोस्। राम्रो परिशुद्धताका लागि, भोल्युम को µL वितरण गर्न सक्षम पाइपेटद्वारा नमूना स्थानान्तरण गर्नुहोस्।
मिनी ड्रॉपर ठाडो गरी समात्नुहोस्, सम्पूर्ण नमूना नमूनाको बीचमा राख्नुहोस् राम्रोसँग (S राम्रोसँग) सुनिश्चित गर्नुहोस् कि त्यहाँ कुनै हावा बबलहरू छैनन्।
फेरी २-d ड्रपहरू (करीव -1०-१०० µL) नमूना डिलुएन्टको तुरून्त बफरवेलमा (B well) थप्नुहोस्। S राम्रोसँग नमूनाको 5µL नमूना को दुई-दुई बूँद बी राम्रोसँग पातलो हुन्छ।
चरण:: टाइमर सेट अप गर्नुहोस्।
चरण:: २ 25 मिनेटमा नतिजा पढ्नुहोस्।
२ minutes मिनेट पछि नतिजा पढ्नुहोस्। भ्रमबाट बच्न, नतिजाको व्याख्या पछि परीक्षण उपकरण खारेज गर्नुहोस्।
नकारात्मक परिणाम: यदि केवल सी ब्यान्ड अवस्थित छ भने दुबै टेस्ट ब्यान्ड (जी र एम) मा कुनै बरगंडी रंगको अभावले कुनै पनि एंटी-डेंगू भाइरस एन्टिबडीहरू पत्ता लागेन भनेर संकेत गर्दछ। परिणाम नकरात्मक वा गैर-प्रतिक्रियाशील छ।
२.१ सी ब्यान्डको उपस्थिति बाहेक, यदि जी ब्यान्ड मात्र विकसित भयो भने आईजीजी एन्टी-डेंगू भाइरसको उपस्थितिको लागि संकेत गर्दछ; नतिजाले विगतको संक्रमण वा डेंगू भाइरसको पुन: संक्रमण सुझाव दिन्छ।
२.२ सी ब्यान्डको उपस्थिति बाहेक, यदि एम बैन्ड मात्र विकसित गरियो भने परीक्षणले आईजीएम एन्टी-डेंगू भाइरसको उपस्थितिलाई संकेत गर्दछ। नतिजाले डेंगू भाइरसको नयाँ संक्रमणको सुझाव दिन्छ।
२.3 सी ब्यान्डको उपस्थिति बाहेक, दुबै जी र एम ब्यान्ड विकसित हुन्छन्, आईजीजी र आईजीएम एन्टी-डेंगू भाइरसको उपस्थितिको लागि संकेत गर्दछ। परिणामले वर्तमान संक्रमण वा डेंगू भाइरसको माध्यमिक संक्रमण सुझाव दिन्छ।
सकरात्मक नतिजाको साथ नमूनाहरू वैकल्पिक परीक्षण विधि (हरू) को साथ पुष्टि गर्न सकिन्छ र एक सकारात्मक निर्धारण हुनु अघि क्लिनिकल खोजहरू।
INVALID: यदि कुनै सी ब्यान्ड विकसित गरीएको छैन भने, परख अमान्य छ कुनै पनि बरगंडी रंगको परवाह नगरी।
FOB Fecal Oult Blood Rapid Test Kit
फ्लू एबी रैपिड टेस्ट किट
एचआईभी रैपिड टेस्ट किट
H.pylori Ag रैपिड टेस्ट किट